Progressive Voice Myanmar » Joint Statement: Myanmar Civil Society Calls for NLD Government to Fully Cooperate with U.N.-Mandated Fact Finding Mission to Myanmar
May 25th, 2017 • Author: 60 Civil Society Organizations •4minute read
ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ၏အစီအစဉ်ဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသို့လာရောက် အချက်အလက်ရှာဖွေမည့် အချက်အလက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့နှင့် အပြည့်အ၀ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးရန် NLD အစိုးရကို မြန်မာ့အရပ်ဖက်လူထုအဖွဲ့ အစည်းများမှ တောင်းဆိုခြင်း။
အောက်တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးထားသော ကျွန်ုပ်တို့ အရပ်ဖက်လူထု အဖွဲ့အစည်းများသည် ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီမှ မကြာသေးမီကဖွဲ့စည်းလိုက်သည့်၊ ရခိုင်ပြည်နယ်နှင့် အခြားတိုင်းရင်းသားများနေထိုင်ရာ ပြည်နယ်များရှိ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ပြဿနာများကို စုံစမ်းစစ်ဆေးမည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အချက်အလက် ရှာဖွေရေးအဖွဲ့ နှင့် အပြည့်အ၀ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးရန် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD)အစိုးရကို တောင်းဆိုပါသည်။
We truly believe that the Fact Finding Mission is important for the people of Myanmar and our shared struggle for rule of law and human rights. The Fact Finding Mission will help the Government of Myanmar to uphold human rights, and it will fosterarule-oflaw culture by establishing the facts and identifying perpetrators of human rights violations to prevent future atrocity crimes in Myanmar.
ထိုအချက်အလက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့သည် မြန်မာပြည်သူများနှင့်အတူ ကျွန်ုပ်တို့၏ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် လူ့အခွင့်အရေး ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှုများအတွက်အရေးကြီးသည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်အမှန်တကယ် ယုံကြည်ပါသည်။ အချက်အလက် ရှာဖွေရေးအဖွဲ့ သည် လူ့အခွင့်အရေးများကို ကာကွယ်မြှင့်တင်ရာတွင် မြန်မာအစိုးရကို ကူညီရာ ရောက်မည်ဖြစ်ပြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အနာဂတ်တွင် ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သော လူ့ အခွင့်အရေးချိုးဖေါက်မှု့ များကိုတားဆီးကာကွယ်နိုင်ရေး အတွက်လည်း၊ အချက်အလက်များရှာဖွေအတည်ပြုကာ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှု့ကျူးလွန်သူများကို ရှာဖွေဖော်ထုတ် ပေးခြင်းဖြင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးမှု့အလေ့အထ ကောင်းကို မွေးမြူ မြေတောင် မြှောက်ပေးရာရောက်မည်ဖြစ်သည်။
Following deadly attacks byagroup later identified as the Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) against three police outposts in Maungdaw and Rathedaung Townships on October 9, the Myanmar military launched an “area clearance operation” in Northern Rakhine State, leading to allegations of serious human rights violations, including mass rape of women and girls, extrajudicial killings, and the widespread burning of villages. The U.N. found that these human rights violations may amount to crimes against humanity. Communities and human rights defenders from Kachin, Karen, Karenni, Mon, and Shan states have long noted similar patterns of violence and abuse on their soil, including to the present day.
အောက်တိုဘာလ (၉) ရက်နေ့တွင် မောင်တောနှင့် ရသေ့တောင်မြို့နယ်များအတွင်းရှိ နယ်ခြားစောင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ (၃)ခုကို ရခိုင်ရိုဟင်ဂျာကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ (ARSA)ဟု နောက်ပိုင်းတွင်သိရသောအဖွဲ့တစ်ခုက ပြင်းထန်စွာတိုက်ခိုက်ပြီးနောက်တွင် မြန်မာစစ်တပ်မှ “နယ်မြေရှင်းလင်းရေးစစ်ဆင်မှု” ကို ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွင် စတင်ပြုလုပ်ခဲ့ရာ၊ အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကလေးငယ်များကို အစုလိုက်အပြုံလိုက် အဓမ္မပြုကျင့်မှုများ၊ မင်းမဲ့စရိုက်ဆန်စွာ သတ်ဖြတ်မှုများ၊ ကျေးရွာများစွာကို လျင်မြန်ပြန့်နှံ့စွာ မီးရှို့မှုများ အစရှိသည့် ပြင်းထန်သော လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုဆိုင်ရာ စွပ်စွဲချက်များကို ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပါသည်။ ဤလူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများသည် လူသားမျိုးနွယ်စုအပေါ်ကျူးလွန်သည့် ရာဇ၀တ်မှုများအဖြစ် ပြောင်းလဲကြီးထွားလာနိုင်ကြောင်းကို ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂမှ ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါသည်။ ကချင်၊ ကရင်၊ ကရင်နီ၊ မွန်နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်မှ လူထုအခြေပြုအဖွဲ့ အစည်းများနှင့် လူ့အခွင့်အရေး ကာကွယ်စောင့်ရှောက်သူများက အလားတူ လူ့ အခွင့်အရေးချိုးဖေါက်မှု့ များကို ၎င်းတို့၏ ဒေသများတွင် ယနေ့ထက်ထိ ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ နေရကြောင်းကို ဖော်ထုတ်ပြောဆိုလာခဲ့သည်မှာ ကာလရှည်ကြာခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါသည်။
The U.N. Human Rights Council Resolution that mandated the Fact Finding Mission on March 24, 2017 does not limit the Fact Finding Mission to any particular geographic area of Myanmar. We fully encourage the authorities to cooperate with the Fact Finding Mission to look into the human rights situations in at least Rakhine, Kachin, Shan, and other ethnic states of Myanmar. We strongly support the mission to carry out their mandate.
၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၂၄) ရက်နေ့တွင် ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂလူ့ အခွင့်အရေးကောင်စီမှ အချက်အလက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့ကို တာဝန်ပေးအပ်ရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ မည်သည့် ပထ၀ီဝင်ဒေသမျိုးကို သွားရောက်လေ့လာရမည်ဟု သတ်မှတ် မပေးထားပါ။ အာဏာပိုင်များအနေနှင့် အချက်အလက်ရှာဖွေရေးနှင့် အပြည့်အ၀ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်၍ အနည်းဆုံး ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ကချင်ပြည်နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အခြားတိုင်းရင်းသားပြည်နယ်များရှိ လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေများကို စုံစမ်းစစ်ဆေးရန် ကျွန်ုပ်တို့က အပြည့်အ၀တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။ အချက်အလက်ရှာဖွေရေး အဖွဲ့အနေနှင့် ၎င်းတို့၏ ရည်မှန်းချက်အတိုင်း အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့က အခိုင်အမာ ထောက်ခံအပ်ပါသည်။
We are deeply concerned that if the NLD Government or the military leadership fails to fully cooperate with the Fact Finding Mission, then the human rights situation in various parts of Myanmar may further deteriorate. Suchafailure may lead to more atrocity crimes in our country.
အကယ်၍ NLD အစိုးရ (သို့မဟုတ်) စစ်တပ်ဦးဆောင်သူများအနေနှင့် အချက်အလက် ရှာဖွေရေးအဖွဲ့နှင့် အပြည့်အ၀ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်ပါက မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားရှိ လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေများသည် ပိုမိုဆိုးရွား လာမည်ကို ကျွန်ုပ်တို့အနေနှင့်များစွာစိုးရိမ်မိပါသည်။ ထိုသို့ပျက်ကွက်ပါက ကျွန်ုပ်တို့နိုင်ငံတွင် ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သော လူ့ အခွင့်အရေးချိုးဖေါက်မှု့ များ ပိုမိုများပြားလာနိုင်သည်ဟုယုံကြည်ပါသည်။
We, Civil Society Organizations, believe that the NLD Government desires to establisharule of law culture during our transition to democracy, maintaining that “no one is above the law,” regardless of rank or position. The government’s full support for this Fact Finding Mission is an opportunity to demonstrate its commitment to rule of law. We urge the Government of Myanmar to fully cooperate with the U.N.-Mandated Fact Finding Mission to Myanmar.
NLD အစိုးရသည် ဒီမိုကရေစီစနစ်သို့ ကူးပြောင်းရာတွင် ရာထူးနှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို မကြည့်ဘဲ “ဥပဒေအထက်တွင် မည်သူမျှ မရှိစေရ”ဟူသည့် ဆောင်ပုဒ်ကို ထိန်းသိမ်းရင်း၊ တရားဥပဒေနှင့်အညီ လိုက်နာကျင့်သုံးသည့် တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးအလေ့အထကို အုတ်မြစ်ချပျိုးထောင်သွားရန် ဆန္ဒရှိမည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ အရပ်ဘက် လူထုအခြေပြု အဖွဲ့အစည်း များမှ ယုံကြည်ပါသည်။ အစိုးရအနေနှင့် ဤအချက်အလက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့ ကို အပြည့်အ၀ ထောက်ခံခြင်းသည် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအပေါ် ၎င်းတို့ ၏ တန်ဖိုးထားပေးဆပ်မှုကို ဖော်ပြရန် အခွင့်အရေး တစ်ခုပင်ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာအစိုးရ အနေနှင့် မြန်မာနိုင်ငံသို့လာရောက်မည့် ကုလသမဂ္ဂဦးဆောင်သော အချက်အလက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့နှင့် အပြည့်အ၀ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရန် ကျွန်ုပ်တို့က တိုက်တွန်းတောင်းဆိုလိုက်ပါသည်။
1. 88 Thwe Tit (Monyin)
2. Agency for Basic Community Development (ABC)
3. Ah Linn Bhamo Social Development
4. All Kachin Youth Union
5. Bhamo Local Development Organization
6. Bhamo Women CSO
7. Bridging Rural Integrated Development and Grassroots Empowerment (BRIDGE)
8. Burmese Women’s Union
9. Center for Youth and Social Harmony
10. Chin Human Rights Organization
11. Civilian Ceasefire Monitoring – CCM (Kachin State)
12. Coexist Myanmar
13. COMREG – Community Response Group
14. Democratic Education Institute (DEI)
15. Equality Myanmar
16. Future Stars Child Rights CSO
17. HRDP Network
18. Htoi Gender Foundation
19. Humanity Institute
20. Kachin Baptist Convention (KBC)
21. Kachin Education Foundation (KEF)
22. Kachin State Civil Society Network for Peace – CSNeP
23. Kachin State Women’s Network (KSWN)
25. Kachin Women Union – KWU
26. Kambawza Health Karuna CSO (Mogaung)
27. Karen Human Rights Group
28. Karen Women Organization
29. Kindness Kachin Women Networking Group
30. Legal Aid Network
31. Loi Yang Bum Community Development – LCD (Monyin)
32. Metta Development Foundation
33. Metta-Campaign (Mandalay)
34. MoeThaukPan LGBT Rights CSO
35. Momauk Women CSO
36. MyosatThit LuNge CSO
37. Myu Sha Zin Lum (Ka Maing)
38. Myu Sha Zin Lum (Myiktyina)
39. Myu Sha Zin Lum (Phakant)
40. Nyein Chan Yar (Mandalay)
41. Olive Organization
42. Progressive Voice
45. Shan State Youth Network Committee
47. Sintgu Township – Peace and Development အဖွဲ့ 
48. Smile Foundation
49. Ta’ang Students and Youth Organization
50. Ta’ang Women’s Organization
51. Tai Youth Network
52. Tampadipa Institute
53. Tavoyan Women’s Union
54. Taw Win Hninsi Women CSO
55. Uak Thon Local Social Development Organization
56. Women Peace Network
57. Women Township Leading Group – WTLG (Putao)
58. Women’s League of Burma
59. Wunpawng Ninghtoi (WPN)
60. Yway Latyar Center